Izimpahla Zokulingana zemakethe | Ezezimali Zomnotho
USusana Maria Urbano Mateos | | Ama-akhawunti asebhange, Imali
Uma sikhuluma ngakho imali engenayo engaguquguquki noma imali eguquguqukayo sibhekisa ezigabeni ezimbili zemiqondo ukuthi uma unentshisekelo yokwenza utshalomali kumele wazi futhi ubenakho ukuze ukwazi ukuthola izinzuzo ezinhle kakhulu emalini yethu ukuze uthole inzuzo enkulu ngayo.
I-Las ezimbili ngukutshalwa kwezimali okuthi ekugcineni kuzokulethela izinzuzo ezinkulu kwezomnotho, okusho ukuthi, uzoba nenzuzo, kepha ukwazi ukuthi iyiphi ezolungela imali yakho, ngaphandle kokuthi awukuqondi kahle ukungafani kwabo, sethula lokhu isihloko esizokusiza ukuthi uhlaziye ngokuningiliziwe futhi uthole ukutshala imali ngendlela efanele imali yakho.
Lapho sithi imali engenayo engaguquki noma imali eguquguqukayo Imvamisa bakhuluma ngokutshalwa kwezimali okubizwa ngamasheya, amabhondi, izikweletu, phakathi kokunye okuningi ... Kepha ngamafuphi, kuyinzuzo etholwe kutshalomali oselwenzile, noma ngabe bekuyini, noma ngabe luhlobo oluthile ukonga.
Kulokhu sizogxila kule migqa ukuqonda nokuqonda ukuthi kuyini izimali, ukuze uyiqonde futhi wazi ukubaluleka kwayo, izingozi nezinzuzo esinazo ngalo futhi uma kuyinto efanele amaphrojekthi esicabanga ukuwenzela ibhizinisi lethu kanye nokutshalwa kwemali kwethu okuzayo.
I-Las amathuluzi okulingana Zizohlala njalo ikakhulukazi lezo eziyingxenye yefa elakhelwe leyo njongo, esimweni sezinkampani ezingaziwa.
Incazelo yokuhlukahluka ihlobene eduze nezinguquko ezingenziwa kumanani atholakele enzuzo etholakele
1 Ziyini izimpahla ze-equity?
2 Uyini umehluko phakathi kwamasheya nemali engenayo engaguquki?
3 Into ebaluleke kakhulu mayelana nokulingana
Ziyini izimpahla ze-equity?
Izimpahla ezingenayo eziguqukayo zingenye yamathuluzi wezezimali angasetshenziswa ngokuzayo Alilungisiwe, alaziwa ngokuqinisekile phambilini, okungukuthi, lihlobene kakhulu nemiphumela yezomnotho yalo msakazi.
I-equities yisigaba sokutshala imali esigcinwe izimpahla zezimali lapho ukubuyiselwa kwemali engavunyelwe khona sekuvele kufakiwe noma izinzuzo zalo kwifa. Lapho kwenziwa imali engenayo eguquguqukayo, kufanele kubhekwe ukuthi inani lenzalo elizokhokhwa ngokuzayo ngeke laziwe.
Isikhathi esitshaliwe kungenye into engaziwa, okungukuthi, akufani nemali engenayo engaguquki enikezwa usuku lokuphela, ayinamkhawulo wokuphelelwa yisikhathi noma ithuluzi lokwenza lokho, kuncike kuphela kumnikazi utshalomali yenza isinqumo sokuqhubeka noma ukumise njengoba kukhona nenketho yokukuthengisa. Ayikho indlela yomlingo yokwazi ukuthi ungayimisa nini ngoba ihlale ihamba njalo kuhlale kunalesi sici noma imiphumela efihlekile yotshalo-mali okungukuthi, ungazi ukuthi kuzotholwa malini noma kuzolahleka malini.
Uyini umehluko phakathi kwamasheya nemali engenayo engaguquki?
Umehluko kulula ukuwuqonda futhi uwahlukanise Yebo, kuyadingeka ukuqonda kahle ukuthi imali engenayo eguquguqukayo, kunjalo, ngokungafani nemali engenayo engaguquki, ngeke ukwazi ukwazi inani lokuhamba okuzotholwa yinkampani, noma umphumela onenzuzo omubi ungaba kungenzeka futhi lapho-ke kuzoba khona ukulahleka kotshalo-mali. Lokhu kungenxa yokungapheli izici zenzuzo njengokushintshwa kwezinkampani, isimo sezomnotho, ukunyakaza ngokuya nge imakethe yezezimali iyakhathazeka nezinye izinto. Kungalesi sizathu-ke ibizwa ngokuthi okuguquguqukayo ngoba njengoba igama layo lisho ukuthi liyashintsha noma liguquguquke ngokuya ngezici ezahlukahlukene ezenziwa esikhathini lapho kutshalwa imali.
La Ukulingana esitokisini kuyisibonelo esihle kakhulu sezinzuzo ukuthi inkampani kufanele inikeze abaninimasheya bayo kuye ngokuthi ukuthengiselana kuhamba kanjani, kuchazwa ngenye indlela, izintshisekelo ezizoba nazo ziyashintsha. Uma amasheya ethengwa, lokhu kuzokwenza ushintsho kubanikazi benkampani eshiwo, ukuthola amalungelo athile ngayo, njengokukwazi ukuvota, ukunikezwa imininingwane, noma ukubamba iqhaza emafeni asatshalalisiwe, phakathi kokunye.
Elinye iphuzu elibalulekile esingaligqamisa njenge Izimali ziyizisekelo zokutshala imali, amaholo aguqukayo namasheya akhethwayo.
Singasho ukuthi i- ama-equities yiwona ophambili noma enye yezinto ezibalulekile uma kukhulunywa ngemakethe yezezimali, ngoba ukuthengiselana kwemali engenayo noma izingxoxo kwenziwa emakethe yezimali, phakathi kwabanye.
Ngokungazi izinzuzo zezimali abazosinika zona, ukutshalwa kwezimali kuba yingozi kumasheya, okungenzeki ngemali engenayo engaguquki futhi ingasaphathwa eyokugcina imali eba ngaphezulu kakhulu. Yingakho lapho wenza utshalomali lwakho ku- Amasheya kulindeleke ukuthi akhiqize kakhulu kunakwimali engenayo engaguquki noma kulondolozwe. Kepha kubalulekile ukuthi wazi ukuthi yize kunenzuzo enkulu nokuningi uma kwenzeka esikhathini eside, kungahle kungabi yindlela engcono njalo.
Imali etholwa ngonyaka ingaba, ngokwesibonelo, leyo ehlukaniswe izinkampani futhi kufanele kuqashelwe ukuthi imvamisa iphakeme kunaleyo wena izibonelelo imali engenayo noma okonga, kodwa futhi kuyadingeka ukuthi uqaphele ukuthi inani lamasheya aliwi ngoba uma kunjalo kunengozi yokulahlekelwa inani lenzuzo.
Ngaphandle kwalokho futhi kungaphakama ngoba uma isitoko sanda ngokusobala inzuzo izoba umphumela walokho kwanda esitokweni nasekusebenzeni.
Kuchazwa ngenye indlela Izimpahla ezingenayo ezisebenzisekayo yizo ezinenkokhelo yesikhathi esizayo ezoba umkhiqizo womsebenzi othile. Njengoba kungaba yisibonelo sezenzo lapho inhlangano yakho kwezezimali ivimbela njalo ukukhokhwa kwezikhathi zenzuzo, kepha kufanele bazi ukuthi iyoba yini imiphumela yangempela ngoba lokhu kuncike kulokho inkampani efake imali kulesi senzo maqondana nesabelo .
Izingxenyana lapho ingqikithi ye- imali etshalwe enkampanini okwenziwe ngokusemthethweni nelebula lenkampani yilokho esikubiza ngokuthi amasheya.
Abatshalizimali abazinikezele ukuthengwa kwamasheya kuzoba ngabalingani bezinkampani futhi ngenxa yalesi sizathu bathola amalungelo ngaphezulu kwalokho okutholwayo kule nkampani eshiwo inqobo nje uma ibabela ngendlela yokubuyisa equkethe umholo womtshali-zimali.
Okuvame kakhulu ukuthi okokusebenza kwemali engenayo eguquguqukayo kwenza umbiko wabo wezinzuzo zemali ezitholwe esikhathini eside kepha kuzoba ngokushintshana ngengozi enkulu.
Into ebaluleke kakhulu mayelana nokulingana
Kubalulekile ukugcizelela ukuthi abaninimasheya njengoba nabo bangaba nenzuzo enkulu bangaba nakho ngokumelene nakho. Kungakho kubaluleke kakhulu ukuthi inkampani isebenze kahle ngangokunokwenzeka; okuzokwenza uthandeke kakhulu ku- amehlo emakethe yamasheya futhi uma lokhu kwenzeka abaninimasheya bathola izinzuzo ezinkulu kuguqulwa kube yinzuzo futhi ngaphambi kokuba umphakathi ubaluleke kakhulu. Ngokuphambene nalokho, uma umphumela mubi, inzuzo nezinzuzo kuzokwehla futhi kusobala ukuthi kuzophinde kucatshangwe kumasheya ale nkampani ethile ngaphambi kwemakethe yamasheya.
Manje sizochaza indlela yokunciphisa le ngozi sisebenzisa ukwehlukahlukana, okuhumusha ukungatshali konke endaweni eyodwa, kepha kunconywa ukuthi ukwenze izimali eziningi ezihlukanisiwe ngamanani azoba lusizo kuwe.
Enye indlela yokwenza lokhu ukuthola ezinye imali engenayo engaguquki kanye nolunye utshalomali lwemali engenayo, Ichazwe ngenye indlela, kuzoba ukuthi uhlanganisa isu lapho uzofaka khona izinhlobo ezimbili zotshalo-mali, ngaleyo ndlela kuzoba khona nokutshalwa kwemali okukhulu kumholo oguqukayo, ngakolunye uhlangothi, uma ungaguquguquki kangako engozini amacala, indlela engcono kakhulu kungaba ukutshalwa kwemali.
Kuyindaba ye hlaziya ubuhle nobubi bohlobo ngalunye lokutshalwa kwezimali ukuthi siphakamisa futhi kubalulekile ukuthi ucabange ngalokho ofuna ukukufeza esikhathini esizayo, izidingo kanye nezimpawu zebhizinisi lakho, kanye nokukwazi ukumelana nalezo zinguquko ezinhle nezimbi zokutshalwa kwezimali okuguquguqukayo kahle, bathi akukho lutho olwaluzama ukuthola lutho; igagasi inketho yemali engaguquki lapho uzizwa ungcono ukuba sendaweni yokunethezeka ukuthi yize kungasebenzi kahle, kuhlala kuqinisekisa ukuthi kunemiphumela evuna yona.
Siyethemba ukuthi le ndatshana ibilusizo, sisuse ukungabaza futhi sikusize ukhethe izinqumo ezihlale zithuthukisa izinzuzo zakho zezezimali. Manje njengoba usuyazi le mali, izici zayo nokuthi isebenza kanjani, kuyindaba yokubeka amakhadi etafuleni bese uhlaziya ngokucophelela ukuthi ngabe le ngozi izothathwa yini ezoholela imali yakho kanye nenkampani yakho ukuthi ibe nokuqagela nezinzuzo ezingcono ngoba kusobala lokhu kuzobonakala uma uthatha isinqumo esihle kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ama-akhawunti asebhange » Izimpahla Zokulingana